Yarra Council - Planning and Building Somali
You are here: Home > Services > Planning and Building Somali Print Page
Planning and Building Somali
Qorshaynta iyo Dhisitaanka
Planning and Building (35.97kB)
Haddii aad doonayso inaad fuliso hawl aad wax bedelayso ama shaqo aad ka qabanayso gurigaaga sida:
* Ballaarinta ama cusboonaysiinta gurigaaga
* Rakibida haanta xareeda ah
* Dhisida deyr, hooso yar ama garaash
* Qaadida dhir waaweyn
* Shaqo kale oo kasta
Waxaa waajib kugu ah inaad la xiriirto Golaha si aad u ogaato haddii aad u baahan tahay ogolaansho qorshayneed/ama ogolaanshaha dhismaha. Ogolaanshuhu waa warqad rasmi ah oo ka soo baxda Golaha Degmada oo lagu fulinayo hawshaada.
Guud ahaan, ogolaanshaha qorshaynta waxaa loo isticmaalaa dhulka, tusaale ahaan ka dhisida sar cusub meel dhul ah, saarida dhir, ama bedelida sidii dhulku ahaan jiray. Ogolaanshaha dhisidu waa dhisida sar ama wax markaas la dhisayo. Waxaa fiican inaad la hadasho Golaha degmada si aad u aragto nooca ogolaanshaha aad u baahan tahay. Nadaamka ogolaanshuhu wuxuu ka caawimaa Golaha inay xaqiijiyaan in deriska dhibaata aan macquulayn ahayni uga imaan shaqada, shaqadaasina ku haboon tahay deriska, taya ahaana wanaagsan tahay si amaanana loo qabto. Hawl ka qabashada gurigaaga idan la’aan waxaa laga yaabaa inay keento ganaax.
Waa muhiim inaad ogaato haddii aad ku nooshahay guri hiddo ahaan xafidan, waxaa jira shuruuc adag oo khuseeya shaqada aad qaban karto - fadlan xaqiiji inaad la hadasho Sarkaalka Golaha.
Dalbashada qorshaynta iyo ogolaanshaha dhismaha
Haddii aad u baahan tahay qorshayn iyo/ama ogolaansho dhisitaan, saraakiisha Golaha ayaa kaa caawin doonta foomka dalabka. Kharajka ogolaanshaha iyo waqtiga loo baahan yahay in lagu socodsiiyo dalabkaaga wuu kala duwanaan doonaa iyada oo ku xiran shaqada aad qabanaysaa inta ay le’eg tahay.
Qaybta qorshaynta ee Golaha aad ayey mashquul u tahay waxayna heshaa in ka badan 1,400 oo dalabyada ogolaanshaha qorshaynta sanad walba. Dalab kasta waxaa si taxadar leh u hubiya shaqaalaha Golaha iyo qaybaha kale ee dawlada, sida Melbourne Water ama Hay’ada Ilaalinta Bay’ada (Environment Protection Agency). Dadka deriska kula ah ayaa dabadeed loo sheegaa dalabkaaga, iyada boostada loogu dirayo ama jaraaidka lagu soo qorayo, waxaana la siiyaa 14 berri haddii aanay ku faraxsanayn dhisitaanka. Haddii goluhu hello in ka badan shan diidmo oo ku saabsan dalabka ogolaanshaha dabadeed waxaa loo qabanayaa deriskaaga fadhi dadweyne deriskaaguna waxay ka hadli doonaan dalabka.
Midaan ka dib, Goluhu wuxuu ka go’aansan doonaa inay ogolaadaan ama diidaan. Haddii aadan ku faraxsanayn go’aanka waxaad la xiriiri kartaa Taraybuunalka Arrimaha Maamulka ee Fiktooriya (Victorian Civil Administrative Tribunal).
Diidmada dalabka ogolaanshaha qorshaha dhisitaanka
Haddii aad u malaynayso in laga yaabo inay ku saamayso qof kale wuxuu ka qabanayo gurigiisa, tusaale ahaan, haddii deriskaagu doonayo dabaq labaad gurigiisa, waad ku diidi kartaa Golaha. Dalabka qorshaynta waxaa laga helli karaa Richmond Town Hall, saraakiisha Golaha ayaana kaa caawimi kara inaad soo xerayso diidmadaada qoran. Diidmada qorani waxaa waajiba inay sharxayso sida ay kuu saamaynayso shaqada la soo jeediyey, waana inaad soo jeedisaa xalkaad ku faraxsanaan lahayd.
Soo sheegida shaqada dhisitaanka sharci darada ah
Haddii aad u malaynayso in dhismuhu aanu amaan ahayn, ama wax la dhisayo amar la’aan, waa inaad u soo sheegtaa Golaha.
Golaha ayaa kuu sheegi doona haddii ay haystaan idinka saxda ah, waxayna u diri doonaan sarkaalka soo eega si loo xaqiijiyo in ay amaan tahay.
Hawl qabashada gurigaaga ogolaansho la’aan waa gaf aad u weyn waxaana laga yaabaa in lagu ganaaxo ama maxkamad lagu geeyo.
Macluumaad intaas ka badan oo ku saabsan ilaalinta wax- ka-dhisida Yarra, fadlan wac Golaha 9205 5255 ama booqo www.yarracity.vic.gov.au/planning. Waxaad kaloo la hadli kartaa qof afkaaga ku hadlaya adigoo wacaya adeega turjubaanka golaha 9280 1940.
Macluumaad intaas ka badan oo ku saabsan adeegyada turjubaanka, fadlan wac 9280 1940 weydiina qoraalka Yarralink ama booqo www.yarracity.vic.gov.au.